के चाहन्छन् छोराछोरी अभिभावकबाट ? – Chitwan Post
जीवनमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने धेरै कठिनतम जिम्मेवारीमध्ये अभिभावक बनेर निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैभन्दा अगाडि आउँछ । बालबच्चा जन्माउनुपूर्व, जन्माएपछि हुर्काउने कुरा, उनीहरुलाई शिक्षादीक्षा दिने कुरा, उनीहरुलाई प्रसन्न राख्ने कुरा, तिनका विचार र व्यवहारसित सन्तुलन मिलाउने कुरा, तिनका रूचि, इच्छा र माग परिपूर्ति गर्ने कुरा जेजति छन्, यी एकसे एक अप्ठ्यारा विषय हुन् ।
बालबालिकासित व्यवहार गर्दा देखिने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुस्तान्तरको समस्या हो । बाबुआमाले बिताएको समय, तिनले भोगेका अनुभूति, साथीसँगी, सामाजिक अवस्था र गरेका कामको तरिका एउटा हुन्छ भने बालबालिकाले बिताएको समय, भोगिरहेका अनुभूति, साथीसँगी, समाज व्यवस्था र गर्ने कामको तरिका अर्को हुन्छ । बाबुआमासित आफ्नै भोगाइ र संस्कार हुने भयो, छोराछोरीसित नयाँ समयको भोगाइ र संस्कार हुने भयो । मूल समस्या यी दुई भिन्नताबिच एकरुपता हुन नसक्दा देखा पर्ने अवस्था हो ।
बाबुआमाका आफ्ना आग्रह, जीवनशैली र मान्यता हुन्छन् । छोराछोरी ‘म हिँडेको बाटोमै अघि बढून्’ भन्ने धेरै अभिभावकको चाहना हुन्छ । मैले जे खाएको छु, जस्तो दुःख पाएको छु, जस्तो संस्कार लिएर आएको छु्, बाबुआमासित जेजस्तो व्यवहार गरेको छु, मेरो छोरो अथवा छोरी पनि सकेसम्म त्यही अभ्यास र मान्यतामा अघि बढे हुन्थ्यो भन्ने अधिकांश अभिभावकको चाहना हुन्छ । यो चाहना केही हदसम्म अन्यथा पनि होइन । बालबालिका पनि अधिकांशले देख्ने, सिक्ने, भोग्ने, जान्ने, सुन्ने, हेर्ने भनेकै घरमै हो; बाबुआमालाई नै हो । छोराछोरीका धेरैजसो सपनामा अभिभावकका सपना पनि समावेश हुन आइपुगेका हुन्छन् र धेरैजसो बालबालिका अभिभावककै सुझाव, सल्लाह र मार्गदर्शनमा नै अघि बढेका हुन्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि सबै बालबालिका बाबुआमाले चाहेजस्तै शतप्रतिशत उनीहरुकै बाटोमा भने अवश्य छैनन् । हाम्रा बालबालिकाले सिक्ने आमाबाबुबाहेकका अरु पनि स्रोत छन् । साथीसँगीको रूचि, बदलिँदो सामाजिक अवस्था र यसले उपलब्ध गराएका अन्य विकल्पहरुमा पनि उनीहरु आकर्षित हुन्छन् । बाबाआमाले भनेका विकल्प र साथीसँगी या अन्यले सुझाएका विकल्पहरुमा पनि उनीहरु अघि बढ्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले तिनको क्षमता, रूचि र वास्तविकताको निक्र्योल गरी यदि उचित रहेछ भने आफ्ना मान्यतालाई पनि तिनकै मान्यतामा जोडेर ऐक्यबद्धता जनाउनु उपयुक्त हुन्छ । बालबालिकाका आँखाहरु हाम्रो समयका आँखा होइनन्, तिनको शरीर र मस्तिष्क पनि हाम्रो समयका होइनन्, त्यसैले आफ्नै समयका आँखाले तिनले हेरेका दृश्यहरुलाई उनीहरुकै जिम्मा लगाएर आफूले होस्टेमा हैँसे थप्नु अभिभावकको दायित्व हो ।
अभिभावक पनि एउटा विद्यार्थी हो । त्यसो त, जीवन नै एउटा सिकाइस्थल हो । यहाँ हरेक व्यक्तिले केही न केही सिकिरहेको हुन्छ । अभिभावकले पनि बालबालिकासित कुरा गर्ने, समस्याहरुका बारेमा छलफल गर्ने, उनीहरुलाई प्रसन्न बनाउने कुरा सिकिरहेको हुन्छ । त्यसैले, यसरी सिकिरहने सिकारू कहिल्यै पनि जड हुँदै, पुरातन र यथास्थितिवादी हुँदैन । संसारका हरेक सिकारूजस्तै अभिभावक पनि गतिशील र परिवर्तनकामी हुन्छन्, हुनुपर्दछ ।
हाम्रा आजका बालबालिकाले आजको सीप सिक्ने हुन्, आजका कुरा पढ्ने, भोग्ने र व्यवहार गर्ने हुन् । हिजोका कुरा तिनले सुन्न सक्छन्, पढ्न सक्छन् र सम्भव भएसम्म व्यवहार पनि गर्न सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन् । तर, हिजोका कति कुरा तिनले चाहेर पनि आज प्रयोग व्यवहारमा ल्याउन सक्दैनन्, यद्यपि हामी अभिभावकको मनले भने तिनले हामीले जस्तै काम, व्यवहार र जीवनशैली अपनाए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्दछ । हामी अभिभावकको कर्तव्य भनेको समयको गतिलाई पनि बुझ्न सक्नु हो । बालबालिकाका बदलिँदा मान्यतासित आफ्ना आग्रह र मान्यतालाई तुलना गरेर तिनलाई पनि आफ्नै मान्यतामा घिसार्न खोज्नु बर्बरता हो, बालबालिकाको अधिकार र रूचिविरूद्धको काम हो ।
आज बाबुआमा र छोराछोरीबीच देखिएका असहमति र असझदारीका कारणमध्ये यो पुस्तान्तर अर्थात् नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताका मान्यताबीचको बेमेल मुख्य देखिन्छ । यतिबेला बालबालिकाले भन्दा अभिभावकले नै धैर्य गर्नुपर्दछ । आफ्नो इगोलाई घटाएर बालबालिकासित संवाद गरी उपयुक्त परामर्श दिन र उचित निर्णय लिन सक्नुपर्दछ ।
बालबालिका साँच्चै नै हामीबाट के चाहन्छन् ? धेरथोर सबै अभिभावकले बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकबाट गर्ने आशा र अपेक्षा बुझ्नुभएकै हुन्छ, तापनि तिनका सबै रूचि, आशा र अपेक्षाबारे भने हामी जानकार नरहन सक्छौँ । हाम्रा बालबालिका हामी उनीहरुप्रति कस्ता भइदिएको मन पराउँछन् त ? आउनुस्, एकछिन तिनका आशाअपेक्षाप्रति केन्द्रित बनौँ ।
बालबालिकाका आडभरोसा भनेकै अभिभावक हुन् । ‘माया बैगुनी, नभई नहुनी !’ भनेजस्तै बालबालिकालाई बाबुआमा नभई पनि हुँदैन, हुँदा पनि झगडा गरिहहने बानी हुन्छ, अर्थात् गुनासो गर्ने, भनेको नमान्ने स्वभाव हुन्छ । हामीले जीवनमा सबैभन्दा बढी गाली, पिटाइ र सतर्कता मुख्यतः तीन पात्रहरुबाट हासिल गरिरहेका हुन्छौँ ः आमा, बाबा र गुरू । केटाकेटीलाई सबैभन्दा धेरै मन नपर्ने पनि यिनै हुन्, किनकि ‘खालि किचकिच गरेको ग¥यै; यसो गर्, उसो गर् भनेको भन्यै !’ बिछोडमा सबैभन्दा याद आउने, शून्य महसुस हुने पनि बाबुआमा र गुरूहरुकै हो ।
हामीले बेलाबेलामा ‘तिमीलाई साँच्चै माया गर्छु छोरी, अथवा छोरा’ भनेर तिनलाई सुनाउने गर्दछौँ । तर, त्यसरी सुनाउने तर कहिल्यै पनि व्यवहारमा तिनले महसुस गर्न नपाउने भयो भने राम्रो हुँदैन ।
साँचो माया व्यवहारमा
बालबालिका हामीले साँच्चै नै माया गरेको महसुस गर्न चाहन्छन् । त्यो माया व्यवहारबाट देखिनुप¥यो । हामीले माया गर्नासाथ उनीहरुको आत्मविश्वास पनि बढेर जान्छ भने उनीहरुले आफू सुरक्षित भएको अनुभव पनि गर्दछन् । बेलाबेलामा उनीहरुसित नजिकिने, उनीहरुलाई मन परेको कुरा कहिलेकाहीँ किनेर ल्याइदिने, कपडा किन्दा विशेष ध्यान दिने, समय–समयमा अरु मानिसका अगाडि पनि छोराछोरीको प्रशंसा गरिदिने, बेलाबेलामा विशेष उपहार ल्याइदिने आदि कामले हामी बालबालिकालाई साँँच्चै नै माया गछौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो यो व्यवहारका कारण बालबालिकाले बाँकी संसारका चुनौतीसित लड्ने ऊर्जा प्राप्त गर्दछन् ।
सकारात्मक पृष्ठपोषण र प्रशंसा
दोस्रो, हाम्रा छोराछोरी हामीबाट बारम्बार आवश्यक सल्लाह, परामर्श र पृष्ठपोषण भइरहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुले गरेका हरेक कामलाई सकारात्मक टिप्पणी र प्रशंसा गरियोस् भन्ने तिनको भित्री चाहना हुन्छ । यसो हुँदा बालबालिकाले आफू अघि बढ्ने विशेष ऊर्जा प्राप्त गर्दछन् । बालबालिका भलै साना छन्, धेरै ठूला कुरा गर्दैनन्, तर कत्ति पनि बुझ्दैनन् भन्ने कुरा गलत हो । हामीले निरन्तर छोराछोरीलाई ‘तिमीले राम्रो गरेका छौ, यसरी नै राम्रो गर्दै जाऊ’ भन्यौँ भने ती अझ जाँगरिला र सिर्जनशील भएर अघि बढ्न सक्छन् ।
कोरा उपदेश होइन, ठोस मार्गदर्शन
‘अभिभावकबाट बालबालिकाले अपेक्षा गर्ने तेस्रो कुरा भनेको उचित मार्गदर्शन हो, अमूर्त उपदेश होइन । हामीले प्रायः यसो भएन, उसो भएन, राम्रो गर्नुप¥यो’ भनेर उपदेश, आदेशमात्रै गरिरहने तर ठोसरुपमा तरिका र विधि नसिकाइदिने गर्दा बालबालिका अलमलिन्छन् । उनीहरु हाम्रा अभिभावकले अमूर्त उपदेशभन्दा स्पष्ट मार्गदर्शन र तरिका बताइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । यदि बालबच्चाले कुनै गल्ती गरे भने, काम बिगारे भने त्यस्तो बेलामा झर्कोफर्को गर्ने, रिसाएर बोल्ने, गालीगलौच गर्ने होइन; अब गल्ती कसरी नगर्ने ? कसरी अघि बढ्ने कहाँनेर त्रुटि भयो ? भन्नेजस्ता विषयमा अत्यन्त प्रेमपूर्ण परामर्श र मार्गदर्शन प्रदान गरियोस् भन्ने हाम्रा छोराछोरी चाहन्छन् ।
चौथो, बालबालिका आफूलाई ‘जहिले पनि अभिभावकले एउटै नियम’ नलादिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । समयअनुसार उनीहरुमा पनि विभिन्न परिवर्तनहरु आइरहेका हुन्छन् । कपाल काट्ने, पाल्ने, खाने, हिँड्ने, नङ काट्ने, फाल्ने, कपडा लगाउने, नलगाउने भन्ने विषयमा सधैँ एउटै धारणा राख्नुहुँदैन । १—५ वर्षसम्मका बाबुनानीलाई जे भनेर हुन्छ त्यो ६—१२ वर्षका बाबुनानीलाई भनेर हुँदैन । १३—१९ वर्षका बाबुनानी र २० भन्दामाथिको उमेर समूहका युवायुवतीका रूचि, आकांक्षा र परिपक्वता पनि फरक–फरक हुन्छन् । त्यसैले, हामीले सबैलाई एउटै र उही मान्यताका बलमा व्यवहार गर्नुहुँदैन । बालबालिका समयअनुसार हाम्रा बाबाआमाले आफ्ना मान्यता र विधिनियममा पनि परिवर्तन ल्याए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।
गल्तीका बेलामा सुरक्षा
पाँचौँ, बालबालिकाहरु आफ्ना अभिभावक उनीहरुले गल्ती गरेका बेलामा निरूत्साहित गर्नेभन्दा अब गल्ती नगर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । प्रायः हामीले बालबालिकाले गल्ती गर्दा एकाएक आवेशमा आएर गाली गर्ने, पिट्ने, रिसाउने गर्दछौँ । हाम्रो यस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हाम्रा छोराछोरीलाई मन पर्दैन । उनीहरु जहिले पनि बाबुआमा हाँसेको, आफूलाई सान्त्वना र ढाडस दिएको, खुसी भएको देख्न चाहन्छन् । कति गल्ती बालबालिकाले जानेर गरेका हुन्छन् भने धेरैजसो अन्जानमा गरेका हुन्छन् । यस्तो बेलामा चौतर्फी गाली गर्ने, आलोचना र टिप्पणी गर्ने मानिसहरु मात्रै हुन्छन् । उनीहरुको एक प्रकारले होस हराएको हुन्छ । त्यस्तो बेलामा घरमा आउँदा बाबुआमा रिसाएर गाली गर्दा थप विचलित हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुलाई गल्ती महसुस गर्न र अबदेखि यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन सुझाव दिँदै थप चिन्ता नगर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ । ‘मानिसबाट गल्ती हुन्छ, तर पटकपटक गल्ती गर्न हुँदैन । अबदेखि सकेसम्म गल्ती नदोहो¥याउनू, तर गल्ती भयो भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । दुःखी नहोेऊ । मानिसले गल्तीबाटै सिक्ने हो । अब यही गल्तीबाट सिकेर सावधान रहनू !’ भनेर सम्झाउँदा ती पनि थप चिन्तित हुनबाट जोगिन्छन् । उनीहरुमा मलाई दुःखमा र अप्ठ्यारोमा साथ दिने मेरा बाबा अथवा मेरी आमा हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनु हाम्रो दायित्व हो ।
अनेक उपनाम बेठीक
छैटौँ, बाबुआमाले गाली गर्दा अनेक उपनाम राख्ने बालबालिकालाई कत्ति मन पर्दैन । सीतालाई सीते, रामलाई रामे, बदमास, लम्फू, अल्छी, स्वाँठ, भाते, खाते, मोटे, खिनौरी, यस्ता अनेक खालका उपनाम राखेर बोलाउँदा बोलाउँदा बालबालिका आफू साँच्चै नै त्यस्तो हो कि भन्ने ठान्न थाल्दछन् । यो सारै नराम्रो चलन हो । हामी अभिभावक साँच्चै नै आफैँलाई आवेशमुक्त राख्न सक्दैनौँ । हामी रिसाउँदा यस्ता शब्द प्रयोग गरी अथवा नराम्रा उपनाम राखी बालबालिकालाई गालीगलौच गर्ने गर्दछौँ । यसले बालबालिकाको गुप्त मनभित्र आफैँप्रति नकारात्मक छवि कुँदिन पुग्छ । यसका कारण ऊ गतिशील भएर अगाडि बढ्ने क्रममा हीनताबोधको सिकार बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
सातौँ, बालबालिकाले बेलाबेलामा आफूलाई बाबाआमाले सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । बाबुआमाले सुनिदिनुको अर्थ विद्यालयमा अथवा अन्य अवस्थामा हुने अनेक समस्या, बोझ, सुखदुःखबारे बेलाबेलामा सँगै बसेर सोध्ने गर्नुपर्दछ । हामीले सोध्न बिस्र्यौँ भने भने बालबालिकाले बिर्सँदैनन् । उनीहरुले विद्यालयका अनेक गतिविधिका बारेमा घरमा आएर बाबाआमासित आफैँ कुरा गर्दछन् । कति राम्रा कुरा गर्लान्, कति नराम्रा कुरा गर्लान् । त्यतिबेला कुनै पनि विश्लेषण नगरी केवल तिनका कुरा एकोहोरो सुनिमात्र दिँदा पनि ती हलुका हुन्छन्, बोझरहित हुन्छन् । मेरा अभिभावकले सबै कुरा सुन्नुभएको छ, अब केही हुन्छ भन्ने बालबालिकाको धारणा बन्न पुग्छ । कहिलेकाहीँ हामीले बालबालिकालाई त्यसै हप्काउँछौँ । उनीहरुमाथि अन्याय परेको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा तिनलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि सक्नुपर्दछ ।
आठौँ, बालबालिका कहिल्यै पनि आमाबा झगडा गरेको, आपसमा चर्कोचर्को स्वरले कुरा गरेको मन पराउँदैनन् । बालबालिकालाई सबैभन्दा धेरै पीडा हुने विषय नै यही हो । एउटा सानो बालक विद्यालयमा साथीभाइसित कति रमाइलो गरेर पढ्छ, खेल्छ, रमाउँछ, तर जब घर आउँछ त्यसपछि उसले बाबुआमा झगडा गरेको, हानाहान गरेको र पिटापिट गरेको देख्दा कस्तो मान्ला ? उसलाई संवेगात्मकरुपमा कति क्षति पुग्छ भनेर ती अभिभावकले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? बालबालिकाभन्दा पनि ठूलो कुरा के आफ्नो अहम् हो ?
रूचि र चाहना हो ?
आज घर क्षतविक्षत भएको अवस्था छ । श्रीमान् एकातिर, श्रीमती अर्कोतिर, केटाकेटी एकातिर । छोराछोरीको अगाडि अपनाउनुपर्ने संयम, अनुशासन र धैर्यबारे स्वयम् अभिभावक बेखबर बन्ने हो भने बालबालिकाको जिम्मा कसले लिँदा राम्रो होला त ? बालबालिका विद्यालयबाट घरमा आउँदा आमा र बाबाले हाँसेर स्वागत गरेको सारै मन पराउँछन् । कहिलेकाहीँ झगडा गर्न पनि मन लाग्ला । बहस र विवाद गर्न मन लाग्ला । मन माझ्न पाइन्छ मज्जाले, तर छोराछोरीलाई निराश, हताश र उदास बनाएर होइन । यदि मन माझ्नुछ, स्पष्ट हुनुछ, बहस—विवाद गर्नुछ भने उनीहरुको अनुपस्थितिमा गर्न सकिन्छ । प्रत्येक बालबालिकाको यो चाहनालाई हरेक अभिभावकले हृदयङ्गम गर्नु आवश्यक छ ।
सुधारका लागि प्रतीक्षा
नवौँ, बालबालिका अभिभावकले मेरो सिकाइका लागि पर्खिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । कुनै पनि परिवर्तन एकाएक त हुँदैन । उनीहरु भर्खर यस धरतीमा आएका छन् । उनीहरु भर्खर सिक्दैछन् । कहिले लडेर सिक्छन्, कहिले उठेर सिक्छन् । कहिले गल्ती गरेर सिक्छन्, नगरेर सिक्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले खोजेको उपलब्धि एकैपटक आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुँदैन । बालबालिकाले बिस्तारै धेरै कुरा सिक्छन् भन्ने ठान्नुपर्दछ ।
अक्सर, हामी हाम्रा बालबालिकालाई वरपरका बालबालिकासित दाँज्ने, तुलना गर्ने, वरपरका इष्टमित्रका छोराछोरीसित तौलिएर होच्याउने वा कमसल देखाउने गर्दछौँ र आफ्नो सन्तानले पनि धेरै कुरा जाने हुन्थ्यो, सिके हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौँ । स्कुलमा पठाउनेबित्तिकै फूमन्तरमा सबै कुरा जानेर सयमा सय नै प्रतिशत अङ्क पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर जोड दिन्छौँ, जुन अत्यन्त घातक छ । बालबालिकामाथि सबैभन्दा ठूलो दबाब हामीले नै दिन्छौँ, जसलाई बाबुनानीले कहिल्यै मन पराउँदैनन् । कुनै छोराछोरी यदि बाबुआमासित रिसाउँछन्, झगडा गर्दछन् अथवा मन पराउँदैनन् भने हाम्रा यस्तैयस्तै घातक चाहना र विचारका कारण त्यसो भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले, मेरो बाबु अथवा नानीले बिस्तारै समयको क्रमसँगै सबै कुरा सिक्छ भन्ने ठानेर समग्र सिकाइको प्रतीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ ।
दसौँ, बालबालिका आफ्ना अभिभावक कुनै पनि दुव्र्यसनको लतमा नपरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हरेक छोराछोरीको भावना हुन्छ । विद्यालयमा बालबालिकाले घरका कुरा पनि गर्दछन् । यदि कुनै बच्चाका अभिभावकले रक्सी खाएर कुनै बदमासी गरेका रहेछन् र त्यो कुरा उनको बच्चाका साथीलाई थाहा भएर विद्यालयमा ‘तिम्रो बाबाले त रक्सी खाएर बदमासी गरेका’ भनेर टिप्पणी गरिदियो भने त्यो बच्चालाई कति दुःख होला ? हामी अभिभावक जँड्याहा, रक्स्याहा, सुर्तीचुरोटको अम्मली अथवा गाँजाभाङ र धतुरोका दुव्र्यसनी रहेछौँ भने हाम्रो त्यो गल्तीको परिणाम परिवारका अन्य सदस्यसहित बच्चाबच्चीले पनि भोग्नुपर्दछ । यदि हाम्रा बालबालिकाले हाम्रो अम्मल, दुव्र्यसन र दुव्र्यवहारको बारेमा थाहा पाए भने तिनले फेरि हामीलाई कहिल्यै सम्मान गर्दैनन्, हार्दिकरुपमा । त्यसैले, हरेक अभिभावकले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र कहिल्यै पनि जाँडरक्सीको लतमा नपर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ । ‘मेरा बाबाले अथवा आमाले कहिल्यै रक्सी, चुरोट, सुर्ती खानुहुन्न’ भनेर अरुलाई सुनाउन पाउँदा हाम्रा छोराछोरी गौरव गर्दछन् ।
एघारौँ, बालबालिका विद्यालयमा धेरै साथीभाइसित भेट गर्दछन्, बसउठ गर्दछन्, तर केही साथी भने तिनका विशेष हुन्छन् । मनका कुरा सेयर गर्ने केही खास साथी बनाएका हुन्छन्, तिनले । कहिलेकाहीँ साथीलाई आफ्नो घरमा लिएर आउन मन पराउँछन् । अर्को साथी पनि ऊ साथीकहाँ जान मन पराउँछ र उसलाई आफ्नो घरमा पनि लिएर जान मन पराउँछ । तर, ती दुवै आँट गर्न सक्दैनन् । त्यसको कारण उनीहरु नभएर बाबुआमा नै हुन् । उनीहरु डराउँछन् ः कतै मैले साथी लिएर जाने, बाबाआमाले कसलाई लिएर आएको भनेर गाली पो गर्ने हुन् कि !
एकदमै साथीकहाँ जान मन लागेको र साथीलाई बोलाउन चाहेको कुरा यदि हाम्रा बालबालिकाले भने भने त्यसलाई एकदमै हार्दिकतासाथ अनुमोदन गर्नुपर्दछ । किशोरावस्थामा पुगेका छोराछोरीलाई सम्झाएर, बुझाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । साना–साना १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राम्ररी कुरा बुझेर दुवै पक्षका अभिभावक सल्लाह गरेर कहिलेकाहीँ उनीहरु साथीकहाँ जाने वातावरण मिलाउँदा राम्रै हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको बालबालिकाको सामाजीकरण हो । बालबालिका यसरी नै आपसमा मिल्दै जाने हो, एकीकृत हुँदै जाने हो । बाबुआमाले साथीकहाँ जाने आफ्ना बाबुनानीको प्रस्तावलाई विचारै नगरी एकै झट्कामा ‘हुँदैन’ भनिदिँदा त्यसले बालबालिकाको मनमा नराम्रो चोट पुग्दछ र सामाजीकरणको तिनको प्रयासमा निरूत्साहन हुन पुग्दछन् ।
बालबालिकाका विशेष आदर्श भनेकै तिनका बाबुआमा हुन्, हामी हौँ । तसर्थ हाम्रो आदर्श, सद्गुण र सत्कर्ममाथि कसैले पनि र विशेषगरी आफ्नै छोराछोरीले प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर गम्भीर हुन जरूरी छ । हाम्रा सत्कर्मलाई हाम्रा सन्तानले पनि गौरव गर्न सकून् । एउटा सचेत अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो ।